Mety Hitarika Ireo Mpiasa Hafa Hitaky Ny Zony Ihany Koa Ny Fitokonana Voalohany Eo Amin’ny Sehatry Ny Fifamoivoizana An’habakabaka Ao Taïwan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2016 8:01 GMT
Fitokonan'ireo mpikarakara sidina ao amin'ny China Airline tao Taïpei tamin'ny 24 juin teo. Sary: Brian Hioe. Naverin'ny global Voices navoaka miaraka amin'ny fahazoana alalàna
Ny 24 jona, sambany teo amin'ny tantara tao Taïwan no nahitana fitokonana teo amin'ny sehatry ny fifamoivoizana an'habakabaka. Nifamory voalohany teo alohan'ny foibenny sampana tao Taïpei ireo mpikarakara mpandeha sy mpanamory an'arivony tao amin'ny China Airlines (CAL) [fr] manohitra ny fanovàna ireo fepetra mikasika ny asany. Nihitatra avy hatrany ho fibodoana ny Nanjin East Road tao afovoan-tanàna ilay fitokonana [izay misy ny foiben'ny orinasa]. Nitarika fanafoanana sidina miisa 122 tamin'ny zoma 24 sy sabotsy 25 jona ny hetsika ; mpandeha efa ho 10.000 no voakasik'izany.
Nifarana ny androtr'iny ihany ny fitokonana, niaraka tamin'ireo nahazoan'ireo mpiasa mpikarakara mpandehan'ny CAL fileferana manan-danja avy amin'ilay zotram-piaramanidina. Ary tsy nandalo foana tamin”ireo mpiasa amin'ny sehatra hafa ao Taïwan ny fahombiazan'izy ireo.
Ny antony nahatonga ny fitokonana dia ny fanapahan-kevitry ny fitantanana ny zotram-piaramanidina ao Shina hanova samirery ny toerana hanaovan'ireo mpikarakara mpandeha sy ireo mpanamory fisoratana anarana, tsy nisy fifampiresahana niaraka tamin'izy ireo. Misy fiantraikany goavana izany teo amin'ny fikajiana ireo ora fiasan'izy ireo, fihenan'ny ora handraisan'izy ireo ny asany mialohan'ny fiaingàna izay 140 ka hatramin'ny 90 minitra sy ny fotoana fakàna aina aorian'ny sidina izay lasa 60 hatramin'ny 30 minitra monja.
Amin'ny fampihenàna ireo ora iasàna, afaka manisika sidina bebe kokoa amin'ny any anatin'ny fandaharam-potoanan'ireo mpiasa ilay orinasa amin'ny tsy fanomezana azy ireo fotoana fakàna aina araka ny tokony ho izy, eo anelanelan'ireo sidina roa. Amin'ny teny hafa, manararaotra mitrandraka ny ampaham-potoana natao hakàna aina ho an'ireo mpikarama ilay fanovàna. Ankoatr'izay, ny fanekena vaovao vao haingana nasain'ilay orinasa nosoniavin'izy ireo dia nanitatra ny ora fiasan'izy ireo izay 174 ora isam-bolana ho 220 ora isam-bolana.
Nitombo miandalana nandritra ny taona maro ireo disadisa nisy teo amin'ireo mpiasa sy ilay orinasa izay ny fanjakana taïwanese no tompon'ny petrabola be indrindra ao aminy. Voatsikera noho ireo ora fiasana faran'izay lavabe sy hakelin'ireo tambin-karama omena ho an'ireo izay miasa mandritra ny andro fialantsasatra sy ny andro tsy fiasàna ilay orinasa.
Fihetsiketsehana somary maivana no nitranga nandritra ireo taona vitsy nifanesy. Ny volana Septambra 2014, nanao fanoherana mikasika ny fampitomboana ireo sidina mandritra ny alina sy ny fampihenana ny isan'ireo mpiasa isaky ny sidina tsirairay ireo mpikarakara mandeha sy ny mpanamory. Setriny, nanome fampitandremana ho an'ireo mpanao fanoherana ny mpitantana ny orinasa ary nanome soso-kevitra azy ireo mba hitondra ny olana ho ao anaty fifampiraharahana fa tsy hanao hetsi-panoherana.
Ny volana janoary 2015, nitaky fangatahana mikasika ny karama sy ireo tombontsoany indray ireo mpiasan'ny CAL. Tsy namaly ny hetahetan'izy ireo anefa ny tao amin'ny fitantanana, fa nanasazy ireo mpiasa nanao hetsipanoherana tamin'ny alalan'ny famindràna ny asany ho an'ny sampan'asa misahana ny mpanjifa, sady nanery azy ireo hiverina hanaraka fiofanana fanarenana.
Taorian'ny fihetsiketsehana iray goavana nandraisan'ireo mpiasan'ny orinasa CAL anjara ny faran'ny volana May teo, mpikambana roa tao anaty sendikan'ny teknisianina no noroahan‘ireo mpitantana ny CAL. Niaraka tamin'izay, nisafidy ny hanao hetsika fitokonana ny sendikan'ireo mpiasa ara-barotra eny anaty fiaramanidina mba hanerena ny mpitantana ny orinasa hihevitra ny fahamatoran'izy ireo. Tamin'ity indray mitoraka ity, 2.535 tamin'ireo mpikambana 2.638 ao anaty sendika no nisafidy ny hitokona.
Dimy ora taty aorian'ny fifampiraharahana, nanaiky noho ny tsindrin'ny governemanta mba hiverina amin'ny fomba taloha fikajiana ny ora fiasana ilay orinasa, mba hanao fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ireo solontenan'ny sendika mikasika ireo fanovàna amin'ny hoavy hatao eo amin'ny politika anatiny, mba hiantoka ireo fotoana fialantsasatra ampy, ary hampitombo ireo tambin-karama isanandron'ireo mpiasa any amin'ny toerana niantsonany. Nifarana ny 24 jona efa hariva be ny fitokonana.
Nanambara tamin'ny Facebook ny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana fa:
Ankehitriny, manararaotra ny mpiasan'ny China Airlines ireo mpitantana, ary ohatra iray fotsiny io amin'ireo tranga hafa mitranga atrehan'ireo mpiasa isanandro ao Taïwan. Efa ho isan-taona ny fiakaran'ny PIB ao Taïwan, nefa mba niakatra ve ny karamanao? […]
Eny fa na dia mampiditra vola be aza ireo orinasa, karama farany ambany hatrany no azon'ireo mpiasa mikarama isan'ora, ary saika mitovy hatrany ny karama arotsaky ny lehibe aminao. Ary dia any ampaosiny ny ambiny.
Giazan'ireo orinasa lehibe ireo loharanon-karena, ary miha-misy elanelana hatrany ny fifandraisana eo amin'ireo mpiasa sy ny mpitantana eo amboniny. Tsy mahagaga raha toa ireo tanora ka tsy manana hoavy, satria voaozona ho resy foana izy ireo na toa inona na toa inona hamafy sy hatsaran'ny asa ataony.
Noho izany aleo sintonintsika dieny mialoha ny fanairana mikasika io fanovàna io.
“Tsy misy olona tokony hiasa mafy sahala amin'ny andevo na inona na inona asany”
Tsy tranga manokana hatramin'ny niandohan'ny hetsika ara-tsosialy akory ireo fepetra noraisin'ny fitantanana ny zotram-piaramanidina ao Shina. Efa nanatsidika hevitra teo amin'ireo mpanao lalàna ny avy amin'ny tontolon'ny fandraharahana ao Taïwan mba hampidirana ireo fanitsiana vaovao ao anaty lalàna mikasika ireo fitsipika mifehy ny asa, izay manakana ny governemanta tsy hanana ny fahefany sy tsy afa-miantoka ny fiarovana ireo mpiasa mikasika ireo ora fiasàny ary manome vahàna ireo orinasa mba hanitatra ny habetsahan'ny ora fiasan'ireo mpiasa araka izay tiany.
Tao anatin'ny fivoriana azon'ny daholobe natrehana, ny Antenimiera mpanao lalàna Yuan ao Taïwan, ny 21 Jona lasa teo, nanolo-kevitra mikasika ireo ora tokony hiasàna ny filoha mpanatanteraky ny Antenimieran'ny Varotra, fikambanana iray misolo tena ireo mpandraharaha, fa ny fetra farany ambony indrindra mikasika ireo ora fanampiny eo amin'ny asa dia tokony ho 60 ora isam-bolana, satria “tsara ho an'ny fahasalamana sy ny fidirambolan'ireo mpiasa”.
Raha mbola miziriziry manohy manosika ny hanitàrana ireo ora fiasàna hatrany ny vondrom-piarahamonin'ny mpandraharaha, tsy hahagaga raha mbola hiatrika fanoherana bebe kokoa avy amin'ireo mpiasany izy ireo, singanina manokana amin'ity resaka ity ny fahombiazana azon'ireo mpiasan'ny sidina CAL. Raha ny marina, ny fitokonan'ireo mpiasan'ny sidina dia misarika ireo mpiasa amin'ireo sehatra hafa mba hieritreritra ny zony sy hiandrandra hetsika iarahana amin'ny hoavy mba hanatsarana ireo fepetra iasàn'izy ireo.
Nilaza ny komity mpanomana ao amin'ny Sendikan'ny Hopitalin'ny Tanàna ao Taïpei tao anaty pejy Facebook-ny fa:
Tanora hatrany no fahitàna ireo mpiasa amin'ny zotram-piaramanidina, tsara tarehy, manana fahalalana tsara amin'ny fahaizana miteny, sy ny sisa, irony lazaina fa manana toetranà “petit bourgeois” […] Ankehitriny nanoratra pejy iray vaovao tamin'ny tantaran'ny fitokonana ao Taïwan ireo mpiasan'ny zotram-piaramanidina. Manantena aho fa tsy hijanona fotsiny amin'ny sokajin'ireo mpiasa ireo fotsiny io fahombiazana io, ary hihitatra amin'ireo tsy tsara tarehy loatra, ireo efa antitrantitra, ary ireo sokajy tsy dia mahazo tombontsoa loatra koa io fahombiazana io.
Nitarainan'ireo mpiasan'ny fahasalamana tao Taïwan ny momba ireo fepetra mikasika ny asany nandritra ireo taona maro, saingy sarotsarotra ho azy ireo ny hanana fotoana atokana fotsiny hitokonana. Araka ny lalàna, tsy maintsy hamarinin'ny mpitantana ny fitokonana; ny hetsika hafa rehetra atao dia heverina ho toy ny tsy ara-drariny. Natao hiaro ireo marary ny lalàna, nefa maro dia maro ny mpiasan'ny fahasalamana no milaza fa mifanindran-dàlana amin'ny zon'ireo marary ny zon'izy ireo amin'ny asany. Nilaza i Vicky Lin, mpanampy mpitsabo, hoe:
Nandre olona aho nanontany hoe iza no tokony ho tompon'andraikitra raha toa ireo marary maty noho ny fitokonan'ireo mpanampy mpitsabo. Ny tiako ho anontaniana dia hoe nahoana ireo mpiasan'ny fahasalamana no handray ho andraikiny ireo hadisoana nataon-dry zareo ireny rehefa tena reraka be loatra noho ireo ora fiasàna nalavaina izy ireo? Afaka mandao ny asanay ara-potoana ve izahay? Tsia! Ka nahoana ary izahay no toriana amin'ireny karazana hadisoana ireny?
Tsy misy olona tokony hiasa mafy sahala amin'ny andevo, na inona na inona asany. Tsy misy olona afaka hanome fahafahampo ireo hafa amin'ny famonoany tena na inona na inona asany. Miangavy, aza milaza fa tsy maintsy manana fitsipi-pitondrantena avo be ireo mpiasan'ny fahasalamana.
Natao ho fanairana ireo mpiasa amin'ny sehatra hafa ao Taiwan ny fitokonan'ireo mpiasan'ny sidina hoe mety hiantraika amin'izy ireo koa ilay volavolan-dalàna mikasika ireo fepetran'ny asa io. Tratry ny tsindry noho ny vokatr'ity fitokonana izay miseho ankehitriny ity ireo mpanao lalàna nanao sonia ilay famerenana mandinika. Nahatsapa ny vondrom-piarahamonin'ireo mpandraharaha fa voakitikitika ny tombontsoan-dry zareo noho ny fahombiazan'ny hetsik'ireo mpiasan'ny sidina, ny 27 Jona teo, nanapa-kevitra izy ireo ny hampiato ireo fifampiraharahana rehetra niarahana tamin'ny governemanta sy ireo mpiasa momba ilay fanaovana lalàna bebe kokoa hifehezana ireo andro tsy fiasàna sy ireo ora hiasana.